Software - Gadget Nhau | Gadget Nhau (Peji 5)
Nzira yekufambisa kubva paWindows XP kuenda kuWindows 7 kana Windows 8.1
Uchishandisa application yakapihwa neMicrosoft, zvinokwanisika kutama pasina dambudziko kubva paWindows XP kuenda kuWindows 7 zvichienda mberi.
Maitiro ekugadzirisa iwo Mifananidzo tile muWindows 8.1
Kubudikidza nehunyengeri hushoma isu tinotsanangura izvo zvatinoda kuona mu Mifananidzo tile muWindows 8.1.
Nzira yekubvisa icon kubva kuDLL uye maEEE mafaira muWindows
Kana iwe uchida icon yeEEE kana DLL faira, unogona kuitora neIconons kubva kuFaira muWindows.
Maitiro ekufambisa mbeva pointer pixel nepikisi muWindows
Iyo mbeva mbeva inogona kufambiswa pixel nepikisheni ine hunyengeri muWindows kana neyechitatu-bato kunyorera uchishandisa iyo keyboard.
Nakidzwa ne Star Wars muhwindo reWindows terminal
Star Wars muASCII kodhi inogona kunakidzwa mune yekuraira terminal mukati meWindows kana isu tikamisa iyo Telnet sevhisi.
Maitiro embed Youtube vhidhiyo muPowerPoint 2010
Nemadiki madiki isu tine mukana wekuisa vhidhiyo yeYouTube muPowerPoint 2010 yekuratidzira template.
Ungachinja sei screen resolution muWindows nema keyboard mapfupi
Nekushandisa kwechishoma chishandiso cheWindows uchave nemukana wekushandura kugadzirisa resolution nekushandisa mapfupi ekhibhodi
Maitiro ekumisikidza uye kushanda neOneNote Clipper
OneNote Clipper ibasa rinozotibatsira kurekodha nekuchengetedza zvemukati zvewebhu kuti zviongororwe mune yedu Outlook.com account.
Maitiro ekuita HD kufona ne Skype kubva paInternet browser
Isu tinokuratidza mashoma akateedzana matanho ekumisikidza Skype HD muInternet browser uchishandisa mahara plugin kubva kuMicrosoft.
Mashandisiro ekushandisa EasyBCD kugadzira bootable USB Windows installer
EasyBCD Chishandiso chidiki icho chichatibatsira kugadzira USB flash drive seWindows installer pasina kuifomati.
Maitiro ekuisa watermark mune zvinyorwa zveIzwi
Kana iwe ukashandisa Microsoft Word 2010 zvichienda mberi iwe unogona kusanganisa chifananidzo se watermark kumagwaro ako kuti udzivise kubiridzira.
Iwo akanakisa maapplication eChromecast
Chromecast ndeimwe yemafashoni zvishandiso zvekutamba zvemultimedia zvemukati meyako Android kifaa pane yako TV skrini.
Kurumidza maneja mavhidhiyo eipi fomati pane yako iPad uye Mac
Dzidza maitiro ekuona chero mhando yevhidhiyo pane yako nyowani iPad uye zvakare maitiro ekuvaona iwo nenzira imwecheteyo pane yako Mac
Maitiro ekuvharidzira kushandiswa kweapplication muWindows neChirongwa Blocker
Chirongwa Blocker chishandiso chingatibatsire kuvharidzira kuitiswa kwechero application yakaiswa muWindows.
Maitiro ekurodha pasi nekuisa yakanyoreswa zviri pamutemo Hofisi 2013
Kana isu tiine Office 2013 kiyi yechigadzirwa, saka iwe une ina chete dzimwe nzira dzekurodha mugadziri kubva kune yepamutemo saiti.
Isa yekuwedzera muS Safari kurodha pasi mavhidhiyo eYouTube
Dzidza kuisa chiwedzero kuSafari browser kuti utore mavhidhiyo kubva kuYouTube
Maitiro ekuziva kana yedu antivirus iri kushanda nemazvo
Isu tinotaura hunyengeri hudiki kuti uzive kana iyo antivirus yawakaisa muWindows inoshanda nemazvo.
Maitiro ekutumira mameseji uye mafaera nePushbullet kubva paWindows kuenda kunhare mbozha
Pushbullet chishandiso chidiki chinogona kutibatsira kutumira mameseji kana mafaera kubva kuWindows kune chero nhare mbozha.
Maitiro ekumisikidza Muzambiringa pakombuta yako wega
Nemadiki madiki tinogona kumisikidza Vine kuti iite kuti ishande pakomputa yedu pachedu nyore.
Maitiro ekutarisa maemail matsva pasina kupinda Gmail
Gmail Notifier ipulagi-in iyo inotizivisa kana email nyowani yasvika pasina kuenda kunanga kuinbox.
Maitiro ekugadzirisa mavhidhiyo emahara neYouTube
YouTube inopa mukana wekugadzirisa mavhidhiyo nyore nyore kubva kune yayo portal neshanduko, mapikicha, zvinyorwa, mimhanzi uye zvimwe zvakawanda.
Maitiro ekushanda neMuzambiringa pane yakajairika komputa
VineClient iplagi yeGoogle Chrome iyo inotibvumidza kuti tishande neVine kubva kuTwitter pakomputa yakajairwa.
Maitiro ekuisa chero zvinyorwa zvemafonti pane iOS uye pasina jailbreak
Kunyorera kuti ukwanise kuisa chero mhando yefonti pane iOS pasina chikonzero chejeri
Screen Task inokutendera iwe kugovana skrini yekombuta yako neimwe mukati meiyo imwechete network
Screen Task chirongwa chinobatsira kugovana skrini yekomputa yako nevamwe vari pane imwecheteyo network.
Maitiro ekupinda muXbox Live kubva kuXbox One
Kana iyo Xbox One yabatana, dzidza kusaina kuXbox Live
Iwe unoziva here kuti ndeapi mamwe maitiro aripo ekushandisa pane Winamp?
WinAmp yarega kuvapo uye nekudaro zvirinyore kutanga kuwana mamwe marudzi ekunyorera ekuteerera kumimhanzi.
Iwo akanakisa akawanda protrotocol meseji mameseji vatengi veWindows
Isu tinokuratidza akateedzana eakakura multiprotocol meseji mameseji vatengi veWindows.
OneDrive ichashanda sei mushure mezita reSkyDrive richichinja?
OneDrive izita idzva reSkyDrive, iro rine mashoma maficha ekutsvaga maererano neMicrosoft.
Unyengeri kujekesa Windows Store cache uye nhoroondo
Iyo cache muWindows Store inogona kuve nenhoroondo yezvatakatenga uye nezvimwe, kuve nekudzima iyi ruzivo nekuda kwezvakavanzika zvikonzero.
Maitiro ekuita zvakavanzika uye zvisina kuzivikanwa vhidhiyo kufona naGruveo paInternet
Gruveo ndeye webhu kunyorera iyo inotibatsira isu kuita zvakavanzika uye zvisingazivikanwe kufona nenhamba isina kujairika uye yekunyepedzera.
Maitiro ekutaura nemazwi ezwi paFacebook neGoogle Chrome
Iyo plugin yeGoogle Chrome inogona kutibatsira kuti tisiye kurekodhwa kwezwi senge makomendi kune Facebook zvinyorwa.
Maitiro ekutumira zvirimo zvemavara gwaro kuWindows memory
Clip murairo watinogona kushandisa kutora izvo zvemavara faira kune clipboard memory yeWindows.
Windows 8.1 inozongonyora idhiraivho yakaoma yekomputa yako
Windows 8.1 inotsvaga kunyorera madhiraivha akaomarara nativeally sekureba iwe usinga simudzire kubva paWindows 8.
NFO neDIZ mafaera, ndezvipi uye maitiro ekuaverenga muWindows
Tichataura mashoma ekunyengera ekugona kuona mafaira eNFO uye DIZ mhando muWindows.
Wanga uchiziva here kuti muWindows 8.1 unogona kutoprinta mu3D?
Windows 8.1 ine maficha nyowani uye pakati pawo, ayo ekushandisa 3D Kudhinda natively neayo yemahara chishandiso.
Shut Down Windows 8.1 Computer Uchishandisa Lock Screen
Windows 8.1 inogona kudzimwa nehunyengeri hushoma uchishandisa ino yekushandisa Lock Screen.
Unoziva here zvinotaurwa neMIcrosoft neHofisi yayo yemidziyo yemafoni?
Kuongorora kudiki kweizvo Microsoft inotipa neiyo Hofisi suite yemhando dzakasiyana dzemidziyo mbozha.
Maitiro ekuyedza izvo zvitsva zveKitKat Android 4.4 paWindows
KitKat Android 4.4 ndiyo yazvino vhezheni yeGoogle's inoshanda sisitimu yatinogona kutevedzera pane yedu Windows PC.
Maitiro ekudzoreredza yako yakarasika Android mbozhanhare
MaApplication maviri anogona kutibatsira kudzoreredza yedu yakarasika Android nhare mbozha nematanho akapusa uye nekuita kushoma
Maitiro ekumisa kuburitsa iyo Recycle Bin muWindows
Maitiro maviri aunogona kushandisa kudzima mafaera muWindows usinga bvumidze Regedza Bin.
Maitiro ekuwana ako akanakisa RSS feeds neJellyReader
JellyReader ndeye webhu webhu iwe yaunogona kushandisa kuteedzera yemahara RSS nhau uye yakabatana neGoogle Drive kana DropBox.
Iva neWindows XP, Windows 7 uye Windows 8 pane pendrive yekutenda kuWinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB ichatibatsira kuve nema installer e3 mavhezheni eWindows pane USB pendrive.
WinShake, rubatsiro rwekusvetuka kubva kuKutanga Screen kuenda kuWindows 8 Desktop
WinShake inotibatsira kuti tikurumidze kuisa pasi kubva paKutanga Screen kuenda kuWindows 8 Desktop.
Antivirus, ndechipi pane zvese zviripo chakanyanya kunaka?
Takaita ongororo diki yemashandisirwo akafanira kuve neayo antivirus akasiyana aripo mumusika weWindows.
Iwo gumi akanakisa maficha aunokoshesa muWindows 10
Windows 8.1 ine hunyengeri hwakawanda kune vashandisi vepiritsi ine OS iyi, gumi acho ari akanyanya kukosha maererano neMicrosoft.
Zvinonakidza zvinhu zvaunofanira kuziva nezveWindows 8.1
Windows 8.1 inogona kugadziridzwa kuti iite basa redu pane ino inoshanda sisitimu uye nekukurumidza.
Maitiro ekuongorora komputa yedu neWindows Defender Offline
Windows Defender Offline ndeye yakasarudzika vhezheni iyo Microsoft yatsvaga kuitira kuti igone kushanda ne USB tsvimbo kana CD-ROM kana DVD disk.
Maitiro ekuisa password yakasimba
Tungamira kuti iwe ugone kutarisa kana mapassword aunoshandisa akachengeteka. Kana zvisiri izvo, isu tinokudzidzisa iwe nzira yekumisikidza yakasimba password.
Yekutanga gwara rekushandisa iyo Kindle
Dzidza mashandisiro ekushandisa Kindle chishandiso nenzira yakajeka uye yakapusa
Wepamusoro 5 Mapurogiramu evaimbi (Mac OS X)
Mimhanzi yakakosha nhasi uye ndosaka ndiri kuenda kuzokuratidza izvo kwandiri ndezvezvakanakisa zvishanu zvekushandisa kwevaimbi vanoenderana neOS X Mavericks
Tweetbits inokutendera iwe kuronga ako ma tweets ane anoyevedza interface
Ziva kuziva Tweetbits uye kuronga
Iwo gumi akanakisa ekutora mifananidzo eApple ya10 zvinoenderana naVinagre Asesino
Isu tinokupa iwe gumi akanakisa ekutora mifananidzo ye iPhone ya2013 maererano naVinagre Asesino
Ungachinja sei chero icon muWindows 8
Dzidza maitiro aunga shandura chero icon muWindows 8
Iwo mashanu akanakisa mawebhusaiti ekudzivirira mafonti
Nhasi muVinagre Asesino isu tinotaura nezve edu mashanu anodikanwa mawebhusaiti kurodha pasi typographic mafonti nawo ekugadzirira basa redu
Dzima uye batidza iPhone ine yakaputsika SIMBA bhatani
Dzidza maitiro ekushandura yako iPhone uye kudzima pasina iyo SIMBA bhatani
7 mafomu ekugadzira mafomu ewebhu
Usati washandira kune webhu dhizaini kuti ugadzire mafomu ewebhu, tinokuratidza sarudzo dzakanaka dzinomwe dzichatibvumira kuti tigadzire nyore tisingashandise kune chero munhu.
Maitiro ekuenderera mberi nekuisa Microsoft Office paLinux
Microsoft Office ikozvino inogona kuiswa paLinux nerutsigiro rwezvimwe zvinoshandiswa.
Maitiro ekumhanyisa kunyorera muWindows usina kuiisa
Nekushandisa zvishandiso zviviri zvinonakidza, mushandisi anogona kuzvishandisa kushandura zvinoshandiswa zvinoshandiswa paWindows laptops.
Themeefy inokutendera iwe kuti ugadzire epamhepo zvidzidzo uye nekupa mabasa
Themeefy ndeye webhu kunyorera iyo ichatibvumidza isu kuve vadzidzisi kana vadzidzi mune chaiwo chaiwo makirasi.
Gadzirisa tsaona muWindows 8 pamwe nesarudzo dzayo dzepamberi dzebhuot
Sarudzo dzebhutsu muWindows 8 dzinogona kutibatsira zvakanyanya kana zvasvika pakupora sisitimu isingatangi.
Zvinokosha maapplication eApple
Pane zvakawanda zvakakosha zvekushandisa zveApple, asi nhasi tinokupfupisa iwe muzvikamu gumi neshanu zvakasiyana kuti ugone kuwana zvimwe zvitsva.
Shandisa Windows 7 Desktop Tsvaga Zvinobatanidza
Isu tinokudzidzisa maitiro ekugadzira tsika Tsvaga Zvinobatanidza kuwebhusaiti yako kuti ishandiswe neWindows 7 File Explorer.
Maitiro ekuisa iyo Recycle Bin pane iyo Windows 7 Taskbar
Nhanho-nhanho-nhanho maitiro ekuti ubatanidze ku Recycle Bin pane Windows 7 Taskbar.
Maitiro ekumisikidza iyo Screensaver muWindows 7 patinobva kure nekombuta
Screensavers inogona kushandiswa kuvhara Windows 7 otomatiki kana tisingashandisi komputa.
Nzira yekuvandudza Internet browser zvakavanzika
Indaneti Bhurawuza inochengetedza ruzivo rwakakosha runogona kuteverwa kana tikasahugadzirisa nenzira kwayo.
10 Zvishandiso zvausingazofanire kuisa muWindows 8
Windows 8.1 inouya neakawanda maficha akavakirwa natively, pasina wechitatu-bato anodikanwa mukuburitswa kutsva.
Maitiro ekukudziridza chifananidzo uchichengetedza resolution yayo neAdobe Photoshop
Adobe Photoshop inotipa mukana wekukudza imwe hombe yemufananidzo, kuchengetedza mhando.
Bhurawuza webhu senge pane nhare mbozha
Anowedzera-on inogona kuiswa muGoogle Chrome inogona kutibatsira kuti tione mapeji seapo pane nharembozha.
Maitiro ekurova Google mumibvunzo yedu
Google ine mashoma manomano ekushandisa kushandisa yakatarwa mirairo, zvese izvi zvinopa izvo nekukurumidza uye zvakavimbika mhedzisiro.
Dzoreredza Mafaira Akadzimwa neICare Dhata Yekudzosa
iCare Data Kudzorera chikumbiro icho chichatibatsira kudzoreredza mafaera atakabvisa netsaona.
LastPass, yakachengeteka nzira yekugadzirisa edu mapassword
LastPass chishandiso chinowirirana neakasiyana masisitimu anoshanda uye mabhurawuza eInternet anoshandiswa kubata mapassword.
Maitiro eku DownGrade kubva kuWindows 8 Pro kuenda kuWindows 7
DownGrade kuWindows 7 inogona kuitwa chete kubva paWindows 8 Pro uye pasi pemamwe mamiriro akataurwa neMicrosoft.
10 Inobudirira Kuchengetedza Maitiro Ekufunga muWindows
Tinokurudzira kuti iwe utevere gumi emazano akakosha ekuchengetedza Windows kushanda nemazvo.
Kuteerera kumushure mimhanzi muWindows neAtmosphere Lite
Atmosphere Lite chishandiso chatingaite tsika yekuteerera kune zvakasikwa ruzha muWindows senge kumashure.
Maitiro ekudzima otomatiki kurodha mifananidzo muGmail
Nemadiki madiki isu tinotungamira mukumisa otomatiki kurodha Mifananidzo muGmail.
Nzira yekutora screenshots muWindows 8.1
Microsoft yagadzirisa nguva yekutora screenshots muWindows 8.1.
Maitiro ekuwana yangu Google Chrome kunyorera
Isu tinotaura dzimwe nzira nhatu dzaungashandisa kuwana iyo desktop yeChannel uye woongorora mashandisirwo akaiswa.
Maitiro ekugadzirisa mafaira muGoogle Drive
Mabasa matsva uye anonakidza akawedzerwa kuGoogle Drive kuitira kuti vashandisi vayo vagone kubata mafaera avo nyore.
Isa Instagram pakombuta yako neWindows kana Mac
Chidiki diki kugona kunyoresa uye kuisa Instagram pane ese Windows uye Mac.
Chinja yako wega komputa kune Android chishandiso
Nekushandisa kushoma tinogona kuve neyakagadziriswa Android inoshanda system paWindows kana Mac.
Nzira yekugadzira mufananidzo collage nyore nePicasa
Picasa Icho chishandiso chinogona kutibatsira kugadzira kollaji yemifananidzo zvachose mahara uye nematanho mashoma.
Vuze Torrent Downloader: Dhawunirodha Torrent Mafaira pane Android
Vuze Torrent Downloader inogona kutibatsira kurodha maTorrent mafaera kubva kuApple uchishandisa Wi-Fi:
OnAir, nzira yakanakisa yekuteerera mimhanzi pane akasiyana nhare mbozha
OnAir chishandiso chinotibatsira kuteerera kumimhanzi yakagovaniswa kubva kumakomputa edu kune akasiyana nhare mbozha.
Tweedle, mutengi weTwitter weApple
Tweedle mutengi weTwitter yeApple iyo inogona kutibatsira kubata anopfuura account imwe kubva panzvimbo imwechete.
Dzimwe nzira dzekuteerera kumimhanzi inoyerera
Mumhanzi kutenderera ndeimwe yazvino masevhisi nhasi, yatichazotaura mashoma aunosarudza kubva.
Mashoko eYouTube anoshanda sei kuburikidza neGoogle +?
Kana mavhidhiyo eYouTube aine zvirevo zvakavharwa, unogona kugadzira imwe kubva kuakaunti yako yeGoogle +.
Mapfupi ekhibhodi muWindows 8.1 yekumhanyisa zvaunoshandisa
Nemadiki madiki isu tinogona nyore kugadzira zvidzitiro zvekhibhodi kuti tishandise chero application muWindows 8.1.
5 dzimwe nzira dzakanaka dzekuchengetedza Android nemapassword
Sangana nemaapplication mashoma eApple aunogona kurodha pasi kubva kuGoogle Play kuti udzivirire yako Android kifaa nemapassword akasimba.
Yakanakisa Ex-Metro Style Mapurogiramu eWindows 8.1
Tinokukoka iwe kuti usangane nemaapplication mashoma ayo aanochengetedza mune yekare-Metro maitiro akataurwa neMicrosoft yeWindows 8.1
Maitiro ekurodha pasi nyore Instagram mavhidhiyo
15 yechipiri Instagram mavhidhiyo anogona kutorwa nyore nyore nekunze kana webhu kunyorera.
Iwe unotoziva kare iwe kuti uchatamba sei Isingaonekwe Shamwari?
Iyo Isingaonekwe Shamwari kana Chakavanzika Shamwari ndiyo imwe yemitambo inovaraidza kune aya mazuva. Tinokuratidza dzimwe nzira nhanhatu dzekuti ukoke shamwari dzako.
Maitiro ekugadzira yedu pachedu Google Street View
Iye zvino taigona kushandisa yedu pachedu mifananidzo yakachengetwa paGoogle + kuti ive chikamu cheakasarudzika Google Street View.
Quip ikozvino inowanika kune Android nhare mbozha
Quip ndeye Android application iyo inogona kushandiswa seyakabatanidzwa mavara edhitaina.
SmallPDF nemabasa ayo mana ekushandira online nemaPDF
SmallPDF inogona kutibatsira kushanda nemafaira ePDF tichishandisa chete yedu internet browser.
Iwo ma8 akanakisa mawebhusaiti ekudzivirira mapikicha
Ikozvino pane mamirioni emapuraneti atinogona kurodha pasi pamusoro peInternet. Tinokupa iwe mawebhusaiti akanakisa kuti utore mari.
Chinja ako maRAR mafaera kuIO mifananidzo zviri nyore neAllToIso
AnyToIso chishandiso chidiki icho chichatibatsira kushandura mafaera, maforodha, madhairekitori, maDVD discs uye zvimwe zvakawanda kumufananidzo weIO.
Maitiro ekuvharira Apple nhare mbozha yekugamuchidza kuvana
Nzira mbiri dziri nyore dzekukiya maApple Devices kuti vape ruoko kune vana nechivimbo.
Nyora uye gadzirisa zvakakosha zvinhu muOptlook.com Calendar
Karenda yeAptlook chishandiso chakanakisa icho chichatibatsira kuyeuka zviitiko zvakakosha uye nekugadzira zvimwe zvishoma zvinoenderana nezvatinofarira.
Bhuti kana kwete Boot?, Mashiripiti ISO Mugadziri anozozviona
Mashiripiti ISO Muiti anogona kutibatsira (pakati pezvimwe zvinhu) kuti uone kana iyo ISO chifananidzo chiri Bhootable kana kwete.
Nemaoko chinja zuva remifananidzo yedu uye mifananidzo
Picasa uye exiftool inzira mbiri dzakanaka dzatinogona kushandisa kushandura zuva remifananidzo yedu.
Wongorora diski mifananidzo neMobaLiveCD
MobaLiveCD inogona kutibatsira kuti tione kana iyo ISO mufananidzo ine bootable boot.
Chengetedza edu ese mapassword neF-Yakachengeteka KEY password Manager
F-Yakachengeteka KEY password Maneja chishandiso chidiki icho chinogona kutibatsira isu kugadzirisa ese magwaro ekuwana munzvimbo imwechete.
Chii chinonzi VHD virtual disk mufananidzo?
Tichishandisa iyo Windows 7 Kudzoreredza Disc, isu tinogona kudzoreredza OS inogarwa pane VHD disk mufananidzo.
Manage akawanda gore masevhisi neMultcloud
Multcloud ibasa remahara rinogona kutibatsira kubata akasiyana nzvimbo yekuchengetera mugore kubva panzvimbo imwe.
XBox Urarame pawebhu? Saka ngativei chikamu chayo neWindows 8
Kana iwe uine kunyoreswa kweMicrosoft account (senge Hotmail.com) saka unogona kunge wave kutonakidzwa neXBox Live pawebhu.
"Ndafunga kuvhara account yangu yeHotmail zvachose"
Dzidza nzira chaiyo yekuvhara Hotmail account yezvakanaka nekusarudza chero maviri eanenge aripo dzimwe nzira dzeiri basa.
Unganidzo ye minimalist webhu edhita edhita
inotamba inomiririra kune imwe inotonhorera minimalist mameseji edhita pawebhu, ichipa yakakosha uye yakakosha mabasa ebasa.
Volafile.io inogovera mafaira zvisina kuzivikanwa nevamwe vashandisi
Volafile.lo ndeye gore rebasa iro rinotibvumidza isu kugovana mafaera mune asingazivikanwe makamuri kana mapoka.
Penflip, yakapusa yekubatsirana Pamhepo Mhariri
Penflip idiki mameseji edhita anoshanda mukati megore uye ayo anogona kukoka vamwe vashandisi kuti vashande pane chimwe chirongwa.
Dzima Windows 8 Windows Store sevhisi
Windows Store chishandiso chinowoneka se tile paWindows 8 Start Screen, inogona kudzoserwa kwekanguva.
myMail, yakanakisa email mutengi yeApple uye iOS
myMail chishandiso chidiki chinoita semutengi kumaemail edu, asi chinoenderana neese maApple neApple.
MediaFire Desktop, nzira iri nyore yekushandisa 10 GB mugore
MediaFire Desktop mutengi webasa rekutambira mugore iro ratinogona kushandisa muWindows ine yemahara 10 GB nzvimbo.
Iwo akanakisa emimhanzi vatambi veApple
Rondedzero yevanonyanya kutamba mimhanzi ndeye: PowerAMP, doubleTwist, N7 Player, Neutron Music Player uye VLC. Sarudzo shanu dzakakwana dzevanoda mimhanzi
Iwe unogona sei kudzima maapplication anotanga neWindows
MSConfig iWindows rairo iyo inogona kushandiswa kudzikamisa zvimwe zvinoshandiswa kutanga neOS uye nekuvandudza mashandiro avo.
Muunganidzwa we gumi akanakisa maruneti eApple
Tichataura maLauncher gumi akanakisa eApple, paine kutaurwa kudiki nezvechinhu chakakosha kwazvo kwavari.
Kudzidza kubata mafaera edu neWindows Live Photo Gallery
Windows Live Photo Gallery Chishandiso chidiki chinotibatsira kugovana mifananidzo nemavhidhiyo kumasocial network nemamwe masevhisi.
Kugadzira iko kunonyanya kukosha mabasa paYouTube
YouTube ine Transcriptment seimwe yemabasa anonakidza kwazvo anotipa kuti tinzwisise vhidhiyo zvirinani ichiri kutamba.
Tora yakawanda mari inoshandura yemidziyo yakasiyana
Inonakidza mari inoshandura iyo iwe yaunogona kushandisa pane mbozhanhare kana pakombuta kuburikidza newebhu webhu.
Nyore nzira yekugadzira chaiyo diski muWindows
Dataram RAMDisk chishandiso chidiki icho chichatibatsira kugadzira diski rakavakirwa pakushandiswa kwesistimu ye RAM ndangariro.
Tora kaviri kuti uzarure Mac neKnock
Knock chishandiso chidiki chinobatsira kuvhura iyo Mac nekukanya kaviri paiyo iPhone skrini.
Pane chero munhu anoteedzera maemail edu?
Kuburikidza nematanho mashoma, isu tinokwanisa kuona kana maemail edu achipa zvakavanzika zvemashoko panguva yekutumwa.
Tricks yekuziva kuti ndiani akapinda email account yangu
Mumwe wemibvunzo yakasarudzika paInternet ndewe: Email account; Nemadiki madiki tinogona kuziva kana paine munhu akazviita.
Maitiro ekuvandudza ruzivo mune edu eGmail maNongedzo otomatiki
Nekushandisa macro yeGoogle, tinogona kugadzirisa ruzivo rwekuonana rwatinoda rwoga.
Ita hurukuro-kune-zvinyorwa zvinyorwa ne talktyper
talktyper ndeye webhu inoshanda iyo inogonesa maikorofoni yekomputa yedu kuti titange kuraira uye kushandura zvese zvinyorwa.
MEGA yekubata sevhisi, nei uchiishandisa pakati pevamwe?
MEGA inokupa iwe mukana wekuva ne50 GB yenzvimbo mukati megore mahara zvachose mugore renhare mbozha nemakomputa emunhu.
Kutsvaga yakanakisa nzira yekubvisa maapplication pane Android
Heano mairi maviri ari nyore-kutevera dzimwe nzira dzekubvisa kunyorera kubva kune yako Android kifaa.
Maitiro ekudzima Windows Live Mail muFirefox
Windows Live Mail ndiyo sevhisi iripo muMozilla Firefox painotumira mufananidzo kubva kubhurawuza neemail.
Sei tichifanira kunyorera ruzivo pane USB pendrive
BitLocker chishandiso chakabatanidzwa muWindows 7 uye Windows 8 icho chinotibvumidza isu kuvharira kupinda kune tsvimbo ye USB ne password.
Tsvaga zvakachengeteka uye bvisa mapassword muFirefox
Nemadiki madiki iwe unogona kusvika pakusarudza kudzima kana ese mapassword akachengetwa muFirefox.
Screenshots ine ShareX kune gore uye nekombuta
ShareX idiki yakavhurwa sosi yekushandisa iyo inotibvumidza isu kutora Screenshots munzira dzakasiyana uye dzakasiyana.
Nzira yakapusa yekugadzira iyo Twitter RSS feed
Iko mukana wekugadzira iyo RSS feed yeedu Twitter zvinyorwa zvinoitwa zvinogoneka nekuda kwechinyorwa chakapihwa neGoogle.
Maitiro ekugadzirisa zvimwe zvinotonhorera zveOS X dock? (II)
Muchikamu chechipiri ichi, isu tinoongorora zvimwe zvinhu zvatinogona kugadzirisa mudoko reMac yedu nehurongwa hwekushandisa: OS X Mavericks
Ongorora: Maitiro ekurodha pasi mifananidzo ine Image Downloader zviri nyore
Image Downloader idiki Google Chrome plugin inozotibatsira kurodha mabatch emifananidzo yakachengetwa pawebhusaiti.
OSX Mavericks haizoregi iwe isa imwe application pane yako Mac, dzidza kuzviita
Isu tinokudzidzisa iwe kubata sarudzo dzekuchengetedza idzo OSX Mavericks inokwanisa kukwanisa kuisa yechitatu-bato kunyorera kunze kweMac App Store
Ongorora: Unyengedza kuteedzera edu atumirwa mameseji uye uzive kana achiverengwa
Mabasa maviri anonakidza pawebhu anotibatsira kuziva kana maemail edu akaverengwa kana kwete nekutevera zvavanoita.
Ziva uye nekumisikidza gadzira Mission Kudzora muOSX Mavericks
Isu tinokuudza iwe kuti chii chinonzi Mission kudzora kuri paMac uye maitiro ekuigadzirisa zvakanaka
Rongedza mafaira eExcel, Word uye Powerpoint neiyo HOPTO app yeIpad
Hopto, chishandiso chitsva chekugadzirisa mafaira eHofisi pane iyo iPad
Ongorora: Dzimwe nzira dzekuchengetedza muWindows
Kuti tidzorere zvakakwana system yedu yese nemaapplication ataive takaisa muWindows, tinokurudzira bhuku rekutevera zviri nyore.
Maitiro ekuchimbidza mashandiro emakomputa
Kuti tikurumidze kushanda kwekombuta yedu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho. Iyo komputa ichashanda zvakare sezuva rekutanga.
Isa AppLock pane yako Android uye upe chengetedzo kune ako maapplication
Isu tinotsanangura matanho aunofanirwa kuteedzera kuisa kodhi yekuchengetedza kune iwo maapplication aunoda kuburikidza neAppLock
Android vhezheni 4.4 yakaburitswa yeNexus 7
Android vhezheni 4.4 inosunungurwa yeiyo 7 Nexus 2013
Ongorora: Maitiro ekutyora mapassword muFirefox neGoogle Chrome
Ongororo yekuti ungawana sei mapassword akachengetedzwa muFirefox uye Chrome nhanho nhanho pasina yechitatu-bato kunyorera.
Windows 8 account ine mashoma masimba mukati mematanho mashoma
Isu tinokudzidzisa iwe nedzidziso iyi kugadzira account muWindows 8 ine mashoma maitirwo
11 manomano ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram
Matiki mashoma kune avo vakatanga pa Instagram, zvese zviri pamutemo kudzivirira zvirango.
Sarudzo Yemunhu Pamwe: Yangu 5 Anodiwa Mitambo yeIOS
Mune ino chinyorwa ini ndoda kukuratidza iyo yangu mashanu mitambo yaunofarira yeIOS uchishandisa iyo App Store yekudzora gare gare.
Iyo YouTube isingaite vhidhiyo basa rinoshanda sei?
Youtube ichangobva kusimbisa kuti basa rekutarisa mavhidhiyo pane nharembozha isina internet kubatana ichatangwa munaNovember.
Tim Cook anokurudzira vashandi vake neemail
Vese vashandi veApple vangogamuchira email kubva kuna Tim Cook achivakurudzira kuti varambe vachiita basa ravo uye kuwedzera kwezororo
Sevha uye goverana mazwi enziyo dzese nenziyo musiXmatch
Kana karaoke chiri chinhu chako kana iwe uchingoda kuziva izvo vaunofarira maartist vanoimba, musiXmatch ichakubatsira iwe kuwana iwo mazwi enziyo dzako.
Iwo mashanu akanakisa emimhanzi vatambi ve desktop yako
Tinokuunzira mashanu makuru emimhanzi vatambi vePC kana Mac, zvakaoma kusarudza kuti ndeipi yakanyanya kunaka, asi shanu dzakakosha sarudzo dzevanoda mimhanzi.
Iwo akanakisa maficha eIOS 7 zvakadzama (II)
Mune ino posvo tinoongorora 4 dzakasiyana maficha: Siri, Mifananidzo, Safari uye AirDrop.
Ndedzipi mhando dzekushandisa iyo inochinjika uye yakakura Evernote app inopa?
Kubva pamabhuku ekubika, memos, hurongwa hwekufamba, hesheni yekuverenga, mifananidzo yemabhangi ndeimwe yekushandisa iyo yatichakudzidzisa iwe yeEvernote.
Dzidziso: Synchronize ne iTunes pasina kurasikirwa nedata rako
Tinokuratidza nhanho nhanho maitiro ekufananidza yako iDevice kekutanga ne iTunes paPC yako kana Mac kuti urege kurasikirwa nedata
Shanu dzakakosha maficha ekumhanya pane Android
Android inomhanya kunyorera ndiyo chaiyo shamwari yekurekodha nzira, manhamba uye nekugovana zvese paFacebook neTwitter.
Maitiro ekujekesa Google Nhoroondo
Kuchenesa nhoroondo yako yeGoogle kuri nyore kwazvo. Heino nhanho-nhanho-bhuku kuitira kuti ubvise nhoroondo yako yeGoogle. Bvisa tsvakiridzo chaiyo pasina matambudziko
ASO Nhungamiro: Kuisa maapplication muchitoro cheapp
Iyo ASO (App Store Optimization) yakakosha nekuti kana pasina iyo isu hatizomisikidza chikumbiro chedu nenzira kwayo muchitoro chekushandisa.
Auto Refresh Uyezve, inogadziridza mapeji otomatiki
Auto Refresh Plus inobvumidza vashandisi veChannel kugadzirisa imwe kana akasiyana mapeji ewebhu otomatiki nenguva yenguva.
Iwo akanakisa mameseji maapplication, mamwe maMessage, evashandisi veIOS
BackBerry Messenger (BBM) ndechimwe chezvikonzero zvikonzero nei vanhu vachiri kunamatira kumidziyo ...
Akanaka KUCHENGA - Yakanyanya kusununguka yemahara iOS vhidhiyo mupepeti ane Multi-Layer karenda
Yakanaka CUT ndeyekushandisa kwese kwese (yakatsaurirwa kune iPhone nePadad) uye izere neseti inoshamisa yezvishandiso kubva ...
RockPlayer2 inouya neyekunaka mushandisi interface uye nesarudzo yekugovana WiFi multimedia uye tarisa mhenyu mavhidhiyo online
Pave nenguva yakati rebei kubvira RockPlayer2 ichiitwa kuti iwanikwe kune vashandisi veIOS, uye zvino ndiyo nguva ye…
Mapfupikiso eFirefox ekukurumidza kubhurawuza
Chrome neFirefox - maviri eanonyanya kuzivikanwa mabhurawuza - ane akafanana akafanana mapfupi ekhibhodi, asi hongu ...
Imba! Imba! Zve iPhone: fara kuimba karaoke nechero munhu kutenderera pasirese
Imba! chishandiso chinokutendera kuti uite karaoke shanduro dzenziyo dzaunoda, asi hadzigumira ipapo. Pane…
Ndezvipi zvikamu zvinogadzira iyo keyboard?
Iyo keyboard ibasa remupendero rekushandisa iro rinoshandisa kurongeka kwemakiyi, kuti vaite se ...
VaRom Kugovera - Classic koni online emulators
VaRom Kugovana ndeye yemahara kunyorera iyo inotipa isu 6 dzakasiyana online emulators yeakakora ekunyaradza nemitambo yavo yakatarisana kune yega yega.
Chii chinonzi ip yangu?. Kuziva sei iyo IP iyo yaunobatanidza neInternet
Kana iwe uchida kuziva kuti iwe unogona sei kuona yako IP uye kuti ndeyei, ramba uchiverenga iyi mini dzidziso nezve yako IP kero. Tsvaga kuti chii IP yako iri pasi peminiti.
Tevera maOlimpiki eLondon a2012 neNBC Olimpiki uye NBC Olimpiki Urarame Kuwedzera [Android, iOS]
Kuva neApple kana iPhone kunogona kunyatsoenda kure kure kugutsa nzara yako yezivo yemitambo. Mu…
Nei Airdroid isingabatanidze?
Airdroid chishandiso chinotibvumidza isu kubatanidza chero gadget isu muridzi weiyo Android inoshanda sisitimu nekombuta yedu kure
IE Tab, tevedzera Internet Explorer muGoogle Chrome
IE Tab inotibvumidza kutevedzera zvakakwana Internet Explorer inopa injini mukati meGoogle Chrome interface.
Nzira dzakanakisa dzekutumira zvinyorwa zvemafaira uye nekugovana kubva kuMac yako kune mamwe madivayiri
Imwe yedzakajairika nzira dzekutumira mafaera kana mameseji iri pamusoro peemail kana pakarepo vatumwa….
jetAudio inounza ine simba uye inogadziriswa mimhanzi kutamba kuApple
Kana uchitaura nezve zvimwe-zvakapfuma-zvakanyanya uye zvinoshandiswa zvakanyanya, desktop maodhi edhiyo, jetAudio,…
Nyowani Tab Tungamira, sarudza iyo peji yeiyo nyowani tebhu
Rakareruka dzidziso kuseta default Google peji kana uchivhura iyo nyowani tebhu muGoogle Chrome.
Maitiro ekugadzira nzira ipfupi newaunofarira webhusaiti
Rakareruka dzidziso nemifananidzo yekuti ungagadzira sei kapfupi sechishandiso newebsite yaunofarira.
Tora screenshots neKutarisa kweMac uye humwe hunyengeri [Zano]
Pamusoro payo, Mac's default mufananidzo muoni anotaridzika pakati. Chokwadi, zvinoita kuti iwe uone ...
Vhidhiyo inotora kugadzira yemahara penzura yekudhirowa mifananidzo pa iPhone / iPad
Iyo iTunes App Store izere nemapikicha uye mavhidhiyo maapplication, uye pese pano neapo, tinoona…
Masatu eApple neIOS: gadzira mapikicha mafoto munguva munzvimbo imwechete uye tarisa mune chaicho chakawedzerwa
Nyowani kuchitoro cheGoogle Play uye iOS App Store, Masatu inovandudza uye izere netambo ...
Alarm Clock Ultra, yakanakisa uye yakazara kwazvo alarm yekushandisa yeApple
Iko kushanda kwakanyanya kwekukumutsa iwe mangwanani.
IllegalAlienReport.com: Saiti yekuona uye kuzivisa zvisiri pamutemo muUnited States
Saiti nyowani yatibata. Iyi IllegalAlienReport.com, webhusaiti yakagadzirirwa kuona nekuzivisa zvisiri pamutemo ...
Akanakisa P2P Zvirongwa zveApple
Nhasi, P2P maratidziro eApple ari kuzvarwa patsva senzira dzakanakisa dzekufambisa mafaira pamusoro penzvimbo refu
FileFort Backup, gadzira backup yemagwaro ese, mafoto uye mumhanzi maforodha pane FTP server
FileFort Backup iri nyore, asi ine simba dhata yekuchengetedza utility iyo inogonesa inogonesa ...
Windows Live Solution Center: Gadzirisa matambudziko neMicrosoft
Kune avo vanoda technical service yekugadzirisa matambudziko avo ane hukama nezvigadzirwa zveMicrosoft, kunyanya ku ...
Iorad - Gadzira zvinyorwa zvinofambidzana zviri nyore
iorad ndeye webhu kunyorera iyo inotibvumidza isu kuti tigadzire inopindirana emanyowani nekukurumidza uye nyore
Ndeapi mabhokisi ebhokisi uye ndeapi?
Inozivikanwa sebhokisi rebhokisi kune vese avo vanowoneka mahwindo anoonekwa pakati pekushandisa kwedu kwese mu ...
Nzira yekubatanidza sei yekutarisa kuCPU?
Komputa inotarisa kana skrini chishandiso chinowanzo kuve chakatetepa TFT-LCD skrini, iyo ...
PDF Sb - Injini yekutsvaga pamhepo yemabhuku muPDF fomati
pdf sb yemahara yewebhu kunyorera iyo inotipa isu ine simba pdf faira yekutsvaga injini ine anopfuura mamirioni manomwe emabhuku emagetsi muDhatabhesi yayo.
Chii mafaira eSWF?
Iwo mafaera ane magumo eSWF ndiwo mafaera e multimedia fomati, ye vector mifananidzo, uye yeActionScript kodhi, iyo…
Gadzira Masaini Masaini
Kana iwe uri kuda kugadzira iro remakomputa-rinehupenyu basa rekugadzirisa rako mafoto kana webhu zvemukati, usadaro ...
Ndeapi mafaira enguva pfupi uye ndeapi?
Imwe yemabasa anonyanya kufadza ane masisitimu anoshanda kugadzira mafaira akakurumbira epanguva pfupi, iyo ...
Zvirongwa zvekugadzira matatu
Triptych, sezvaunonyatso ziva, iri mhando yeruzivo bhurocha iyo yakapetwa muzvikamu zvitatu, uko ...
Iko kushanduka kweemail
Maemail akatanga kuburitswa mu1965 uye abva kure kure kubva ...
Wordmark - Tarisa chinyorwa chine mafonti akasiyana panguva imwe chete
wordmark chishandiso chakanakisa chinotibvumidza kuti tifungidzire mavara ane akasiyana mafonti panguva imwe chete kuti tione yakanaka font
Dhizaina wega wega wedhirezi online neWedding Dress
hanzu yemuchato chikumbiro icho chinokutendera iwe kuti ugadzire yako wega yejasi yemuchato pane internet nenzira yakapusa uye inokurumidza
Dhawunirodha dzakasiyana shanduro dzeGoogle Chrome
Mazuva mashoma apfuura Google Chrome yakawana itsva yakagadzikana vhezheni, nhamba 9, inova nhanho kana ...
Chinja ako mapikicha kuva Zombies neZombifier
zombifier chikumbiro chinotibvumidza isu kushandura zviso zvedu mukati memifananidzo kuva zombies kugadzira photomontage ine yakanaka kwazvo mhedzisiro
Dudziro ipi neipi odhiyo yekurekodha muzvinyorwa ne VoiceBase
Voicebase chishandiso chinotibvumidza isu kuita shanduko kubva kumafaira odhiyo kuenda kunyore nyore uye mahara, inotibvumidzawo kuti tishandure.
Ipfupi nhoroondo yeMac OS anoshanda masystem
Ino nguva isu ticha taura nezve nhoroondo yeMac OS anoshanda masystem. Yekutanga vhezheni ...
Maitiro ekugadzirisa makiyi ePC asiri kushanda
Nguva zhinji isu tiri kutaipa kumwe kunhu pakombuta kana kutaura paMSN, uye isu tinoziva kuti kune ...
Kutaura sei "ndinokuda" ine masvomhu equation
Zvirokwazvo, pfungwa iri mubhokisi rakanzi Nerd Love Solve ye "i" ndiyo inonyanya kuda kutaura kuti "ndinokuda" ...
Gadzirisa Firefox neRotator Personas
Iyi script ye browser browser kugadzirisa nekushandura matemplate anoshanda sematehwe akafanogadzirirwa, nguva nenguva achitenderera pakati ...
Ndinoiwanepi iyo yazvino zvinyorwa zvinyorwa
Kuongorora mambure, mazuva ese tinosangana nemifananidzo uye ese marudzi eruzivo atinoona anokwezva, anosetsa ...
Tarisa yangu hotmail
Hotmail hapana mubvunzo kuti ndeimwe yeanonyanyo shandiswa emaimeri masevhisi, uye izvi zvinokonzerwa nekugona kwayo ...
Android anoshanda system
Imwe yedzinonyanya kushandiswa masisitimu anoshanda nhasi iApple, iyo yakatengwa neGoogle muna 2007 uye ine zvinonakidza maficha.
Firebug ndechimwe chezvikonzero nei vamwe vagadziri vewebhu vasina kuchinjira kuFirefox yeChannel. The…
Sezvo isu tatoziva, munguva dzichangopfuura, tekinoroji yakafambira mberi nekusvetuka uye miganho munzvimbo yevaraidzo yemumba uye ...
Kuwedzeredzwa kurodha mavhidhiyo eYouTube muGoogle Chrome
Pakati pekuwedzeredzwa kweGoogle masevhisi eChrome atanga tichikurukura, iyo inonyanya kukosha ku ...
Dzokorora tabo ine keyboard pfupi
Kuti titeedzerezve tabu, isu tinowanzobaya-kurudyi pane iyo tebhu uye enda kune iyo Duplicate sarudzo. Asi kana iwe uri ...
Google Chrome keyboard mapfupi
Paunotanga kushandisa mapfupi ekhibhodi muchirongwa chega chega, unonzwisisa iyo nguva inogona kusvika ...
Isa Google Chrome kunze kwenyika
Chinongedzo chekuisa browser chinowanikwa pane yepamutemo Google Chrome peji. Nzira chete inogona ndeye ...
IInternet yakachinja nzira yekutaurirana nenyika yese, ruzivo rwese rwaimbove rwakaoma ...
Indaneti muzana ramakumi maviri nemana
Indaneti, sekuziva kwedu, inzira yekushandira vanhu vazhinji, nekuti inotibvumidza kuita basa kunyangwe ...
Mapurogiramu akanakisa ekugadzira graffiti
Kana iwe uri fan yezvigadziriso dhizaini uye iwe unoda kuve uri kuseri kwemadziro uchinakirwa nezvakanaka uye zvinonakidza ...
Svika pakuziva iyo Google Chrome interface (II)
Ne Chrome iwe unogona kuve nekanangwo yekuisa pane desktop, iyo yaunogona kuvhura webhu kunyorera zvakananga mu ...
Zvimiro uye mabhenefiti eGoogle Chrome
Iyo yemarudzi mazhinji uye inozivikanwa kambani yewebhu, Google yakavhurwa muna2008 sezvamunongoziva imi, yeInternet browser, yakaomesesa, ...
Norton Antivirus Zvimiro
Uri kutsvaga antivirus yakanaka inodzivirira komputa yako maawa makumi maviri nemasere? Kunyange chiri chokwadi kuti kupihwa ...
Zvakanakira nekuipira email
Isu tinonyatso ziva kuti email ndeimwe yeanonyanya kushanduka zvigadzirwa munguva dzichangopfuura uye kuti ine ...
Isu tinoramba tichidzidza zvakawanda nezve rima divi remakomputa. Tinoreva vanokanganisa. Imwe yerudzi rwe ...
Mhando dzeFirewall: Kubatsira uye Kukanganisa
Isu tatoziva nezve network layer firewalls kana kusefa kwepaketi, inguva yekuziva imwe ye ...
Ungabvisa sei mabhukumaki matsva kubva kuGoogle Bar
Iyo bhaa nyowani yeGoogle inosanganisa nekutadza kuita nyowani mashandiro ayo anogona kunge asiri kune wese munhu anofarira ...
Dzimwe nguva kana iwe uchienda kuYouTube uye iwe uchida kutsvaga vhidhiyo, mibairo yakawanda inoonekwa kuti igone kunakidza ...
Isa yazvino vhezheni yeAdobe Flash Player paGoogle Chrome
Vashandisi veGoogle Chrome vaona kuti dzimwe nguva hatigone kutamba vhidhiyo yeYouTube uye kana ...
Chii chinonzi blog?
Chii chinonzi blog?. Iri blog rakafanana neforamu kana portal? Pano iwe unowana iwo mutsauko pakati peiyo blog uye chii isiri blog, inotsanangurwa nenzira yekuvaraidza uye nemienzaniso.
Gadzira account yeGmail
Dzidziso uye gwara rekugadzira account muGmail, iyo yemahara Google tsamba iyo inokupa iwe kupinda kune mamwe masevhisi akadai seYouTube, Google Play uye nezvimwe.
Ndeapi madhiraivha kana maDhiraivha
Chii chinonzi vatyairi? Pano iwe unowana izvo iwe zvaunoda kuziva nezve Dhirairi (kana madhiragi) akatsanangurwa zviri nyore uye nemifananidzo.
Yechitatu chinyorwa cheiyo trilogy nezve njodzi dzeInternet.Muchiitiko ichi, nezveCyberterrorists uye nzira dzavanoshandisa.
Ares Handbook. Kuiswa uye kumisikidzwa kweAres 2.0.9
Ares Chinyorwa muSpanish. Mune ino bhuku reshanduro 2.0.9 yenguva dzose maAres tichaona maitiro ekumisikidza uye kumisikidza chirongwa kurodha pasi nyore uye zvese muchiSpanish uye nemifananidzo yakawanda.
Dzora makomendi ako kune chinzvimbo chiri nani
Matipi emashoko ekubatsira kumira uye kwete zvinopesana. Zvinhu zvaunofanirwa kuita uye izvo zvausingatomboite. Murefu Muswe, trolls, tsvaga maketani, nezvimwe.
Makomendi uye chinzvimbo chegadziriro.
Makomendi akakosha kusanganisa blog, asi kana zvasvika pakuisa posvo, ivo vanofanirwa kuverengerwa munzvimbo yekumisikidza kana iwe uchida kuti rako rese re-peji basa rive rinoshanda kune injini dzekutsvaga.
AdSense uye Usability. Iyo AdSense Paradox
Chirevo cheAdSense chinopesana nekushandisa. Kana iwe uchida kuita mari neAdsense unofanira kutanga watora traffic yakanaka kune yako blog. Kana iwe ukanyanya kuwedzera kushambadzira kwako kana iwe uine vashanyi vashoma, unenge uri kurasikirwa nemukana wekukura.
PPS. Ndeapi mafaira epspsx uye maitiro ekuona mafaera ane .ppsx yekuwedzera
PPS. Mafaira ane iyo .pps / .ppsx yekuwedzera mharidzo dzinoitwa neMicrosoft PowerPoint. Aya marudzi emafaira anonziwo pps / ppsx
Maitiro ekuisa watermark mumifananidzo yedu
Kana iwe uchida kuziva kuisa ma watermark mumifananidzo yako, iwe unofanirwa kuverenga iyi nhanho-nhanho dzidziso inotsanangura maitiro ekuwedzera watermark kana WaterMark mune ese mifananidzo yaunoshandisa pane yako blog.
ElfIwe pachako - ita elf uye shandura shamwari dzako kuita elves
Asi tarisa matambiro anoita maelves murwizi ... kana iwe uchida kuona shamwari dzako dzichive dzinonakidza elves iwe unofanirwa kuedza ElfYourself
Kuedza Ndiedze blogger!
Imwe blog inopfuura PASINA euro kuburikidza nemapeji eVinagre Asesino. Achabuda ari mupenyu here kana kuti akafa?
Virustotal.com inoongorora mafaera ane makumi matatu nemaviri antivirus, online, yemahara uye neSpanish
Virus Yese inokutendera kuti uongorore chero faira uine makumi matatu nemaviri antivirus zvirongwa pamhepo, muchiSpanish uye mahara zvachose.
Chii chinoita kuti bhuku rakakura rive rakakura? Tine hunhu here?
Chinyorwa chekutanga chakaburitswa mu Tribuna Libre naVictormx, kubva kuElNecio.com. Unobvumirana nemhedziso yavo here kana iwe haugovane navo?
Chinja hotmail password. Ungachinja sei password muWindows Live Hotmail
Kuchinja iyo Hotmail password kuri nyore kwazvo, asi vamwe vashandisi vanowana matambudziko panguva yekuchinja password. Verenga iyi dzidziso kuti uzive maitiro ekuita shanduko nhanho nhanho.
Maitiro ekutsanangura masosi aunoshandisa muzvinyorwa zvako uye chenjera maPCP
Kana iwe usina chokwadi kana uri kunyatsobatanidza kune ako ruzivo masosi, iwe unofanirwa kuverenga ichi chinyorwa
5 zvinhu zvaunofanira kuziva nezve memes
Zvese zvinopenya hazvisi meme :) Hezvino zvinhu zvishanu zvaunofanirwa kuziva nezve memes kuitira kuti iwe ugone kuwana zvakanyatso kubva pane ino nharaunda chishandiso chekusimudzira pakati pemablog.
Chii chiri iko kushandiswa kwekuzvidza dhiraidhi rakaomarara
Defragment Yakaomarara Dhiraivha. Kana iwe uchigara uchinzwa kuti iwe unofanirwa kudzikisira yako hard drive asi iwe wanga usingazivi kuti nei uchifanira kuzviita, iwe unofanirwa kuverenga chinyorwa ichi nezve kudzikisira uye iwe uchave uine chokwadi.
Ndeapi makadhi emifananidzo andakaisa? uye nderipi kadhi yemifananidzo yandinogona kuisa?
Kana iwe uchida kuchinja giraidhi kadhi uye iwe hauzive kuti ndeipi yawakaisa, kana ndeipi iwe yaunogona kuisa, iwe unofanirwa kuverenga bhuku iri
Nhoroondo yechiziviso chakaziviswa
Kana iwe ukapinda mumakwikwi eGedket, unofanirwa kubvisa zvinongedzo zvakanongedzera kublog, nekuti Gedket afunga kuseka isu tese tinotora chikamu.
Mashandisiro aungaita Messenger vaviri kubva kune imwechete komputa uye panguva imwe chete
Shandisa maMessenger maviri panguva imwe chete. Kuchengeta vatumwa vaviri vane maakaundi akasiyana emaimeri akavhurika panguva imwechete zviri nyore kwazvo neiyi mini-nhanho-nhanho bhuku.
Nzira yekuziva kuti ndeipi iyo IP kero mune Hotmail email
Kana iwe uchida kuziva iyo IP kero yemutumi akakutumira iyo Windows Live Hotmail email, mune ino mini tutori iwe uchaona kuti zviri nyore sei kuzviita.
Iko hakuna magamba mune blogosphere? Meme: Magamba mukati kublogga
86400, Emezeta uye Greenshines ndevamwe vevakandibatsira ndisingazive kuti vagadzire Killer Vhiniga.
Maitiro ekuisa mufananidzo mune chako wega siginicha yeWindows nyowani Hot Hotmail
Kana iwe usingazive maitiro ekugadzirisa yako wega siginicha yeiyo itsva Outlook (Hotmail) kana maitiro ekuisa mifananidzo mune siginecha yako, iwe unofanirwa kuverenga bhuku rino.
Maitiro ekuvhura iyo Windows XP Task Manager
Ndinovhura sei Task Manager? MuWindows XP, kuvhura Task Manager unofanirwa kudzvanya mubatanidzwa wemakiyi matatu panguva imwe chete.
Ndingaite sei kuti ndigadzire yangu ndeangu MySpace? Nhanho nhanho dzidziso.
Kana iwe usiri kuziva kuve neyako peji rako pachako paMySpace, tevera iyi dzidziso uye iwe uchaona maitiro ekuzviita nhanho nhanho.
Chenjera Spam¡¡. Mumwe akangwara ari paakasununguka uye ari kufonera imba yako
Spam ndiyo marara avanotitumira kumaemail edu. Usatendere iwe kuzadzwa nemarara uye dzidza kuidzivirira.
Shandisa Messenger pasina kuisa chero chinhu pakombuta yako neMSN Web Messenger
Web Messenger MSN inokutendera iwe kushandisa mutumwa pasina kuisa chero chirongwa. Nhanho nhanho dzidziso yemashandisiro aungaita Mesenger pasina kuisa chero chinhu paPC yako.
Phishing. Chii chinonzi Phishing, maitiro ekuzvidzivirira uye nderipi basa remabhangi uye ekuchengetedza mabhengi pamberi pePishing
Phishing, pishing kana pising, hazvina basa kana akapereterwa nenzira kwayo kana zvisirizvo, chero zvakadaro mazwi matatu anoshandiswa kudzidza zvakawanda nezve dambudziko rimwe chete, kubiwa kwemacode ekuwana kubhengi repamhepo.
Meme yangu yekutanga. Nei ini ndichinyora yangu blog. Uye chii meme?
Chii chinonzi meme? Kutora mukana wangu wekutanga meme ini ndichataura zvandinofunga kuti meme, chenjera! iyo isiri iyo yakasarudzika tsananguro ye meme, ndizvo izvo wikipedia iri.
Maitiro ekunyorera kune RSS feed uye chii chinonzi RSS feed
Kunyorera kune RSS Feed kunokutendera kuti uzive nezve izvo zvinoburitswa pawebhusaiti. Dzidza kushandisa Feeds neiyi nhanho-nhanho-bhuku.
LAST.FM. Maitiro ekugadzira account kuti uwane mimhanzi nyowani uchishandisa LASTFM
Last.FM ndiyo nzira nyowani yekutsvaga mimhanzi online. Sangana nemapoka matsva uye maartist nekugadzira yemahara account paLast.fm nerubatsiro rweiyi nhanho-nhanho-bhuku.
Dzivisa Messenger kugadzirisa kana kudzokera kumashure kune yapfuura vhezheni
Iwe unoda kudzivirira kunatsiridza yako Mutumwa? Iwe unoda kudzokera kumashure kune yapfuura vhezheni yeMessenger? Kuti uenderere mberi uchishandisa yako MSN vhezheni, verenga iyi nhanho-nhanho-bhuku.
Maitiro ekuisa ma mp3s ane vhoriyamu imwechete uye kudzivirira vhoriyamu inowedzera pakati penziyo nenziyo
Iwe yako mp3s inonzwika yega yega pane rimwe vhoriyamu, iwe ungaisa sei dzese nziyo dzako pane imwechete vhoriyamu? Verenga bhuku rino uye iwe uchaona maitiro ekumisikidza odhiyo ye mp3s ako zviri nyore.
50.000 peji maonero. Inotevera chiteshi zviuru zviviri zvevashanyi vezuva nezuva
Anopfuura mapeji zviuru makumi mashanu akatakura nekutenda kwauri. Kukwazisa kunovava.
MP3Gain. Kuisirwa bhuku reshanduro uye chiSpanish cheMP3Gain
MP3Gain inoita kuti utendeure maMP3 ako ese vhoriyamu imwechete kuti urege kuenda matsi pakati penziyo. Verenga iro MP3 Gain bhuku kuti uzive maitiro ekudzivirira aya kusvetuka muhuwandu.
Kupa kwe44 XBox 360. Maitiro ekuhwina yemahara Xbox 360 neMSN naBuddy
Xbox 360 kupihwa kupi.Tora chikamu mahara mumatanho eMSN.es uye kuhwina XBox360 nekupinda mukukwevera kwemavhiki maviri emakwikwi
Iyo faira yakawedzera. Ndezvipi uye maitiro ekuona zvakawedzerwa zvakavanzika
Iwo ekuwedzeredzwa anoita kuti iwe uzive kuti ndeipi fomati faira ndeyavo, asi iwo ekuwedzeredzwa akavanzwa nekutadza muWindows. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekuona ekuwedzera, ramba uchiverenga bhuku rino p
Kwese kupi FM. Maitiro ekugadzira account pane chero kupi zvako.FM yekuteerera kumimhanzi yako chero kupi
Kwese kupi FM inokutendera kuti uteerere kumimhanzi yako yaunofarira kubva chero kupi. Ona kuti zviri nyore sei kugadzira yako Anywhere.fm account uye tanga kuisa nziyo nedanho-nhanho-rebhuku.
IZArc compressor-decompressor. Maitiro ekuisa IZArc yemahara yakawanda-fomati compressor uye kanganwa nezve WinRar
IZArc ndeye yemahara compressor inowanikwa muSpanish (uye inodarika makumi mana mitauro) iyo inopa imwe yemahara imwe nzira kuWinRAR kana WinZip. Nebhuku rino rekushandisa iwe uchaona maitiro ekuisa IZArk nyore uye nhanho nhanho.